Polyurethane Camera fiberglass Indwangu Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Polyurethane Camera fiberglass Indwangu Factory
Indwangu ye-Pu Polyester
Indwangu ye-Pu Polyester iyindwangu ye-fiberglass eboshwe nge-Polyurethane, nezinto zokwenziwa ezinemisebenzi eminingi, ukwakheka kwe-PU eboshwe ngendwangu ye-fiberglass ingakwazi ukuzivumelanisa nezindawo ezahlukahlukene.Iqukethe ukuqina okuhle, ukuqina, ukuthamba, umbala ogqamile, ukumelana okuphakeme kokugqoka, kubanda, uwoyela, amanzi, ukuguga nesimo sezulu. Ibuye isebenze nge-anti bacterium, futhi ingasetshenziselwa ukufometha isikhunta, ukufudumeza ukushisa kanye ne-anti-ultraviolet.
Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu
Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Fabric Indwangu iyindwangu engashi umlilo eyenziwe ngokumboza ilangabi le-polyurethane ebusweni bendwangu ye-fiberglass ngendwangu yokumboza ubuchwepheshe. It has anhlobonhlobo izicelo kanye nezici high lokushisa ukumelana, ukwahlukanisa, engangenwa umlilo, ungangeni manzi futhi uphawu moya.
Pu Camera fiberglass Indwangu
Indwangu Eboshwe nge-fiberglass yendwangu iyindwangu engashi yomlilo eyenziwe ngokumboza ilangabi le-polyurethane ebusweni bendwangu ye-fiberglass ngendwangu yokumboza ubuchwepheshe. It has anhlobonhlobo izicelo kanye nezici high lokushisa ukumelana, ukwahlukanisa, engangenwa umlilo, ungangeni manzi futhi uphawu moya.
Indwangu ye-Anti Corrosion Fiberglass
Indwangu ye-Anti Corrosion Fiberglass iyindwangu engacimi umlilo eyenziwe ngokumboza ilangabi le-polyurethane ebusweni bendwangu ye-fiberglass enobuchwepheshe bokunamathela. It has anhlobonhlobo izicelo kanye nezici high lokushisa ukumelana, ukwahlukanisa, engangenwa umlilo, ungangeni manzi futhi uphawu moya.
Ukushisa Kuphathwe Indwangu Enkulu ye-fiberglass
Indwangu Yokushisa Ephathwa Nge-Bulky Fiberglass Indwangu iyindwangu engashi umlilo eyenziwe ngokumboza ilangabi le-polyurethane ebusweni bendwangu ye-fiberglass ngobuchwepheshe bokunamathela bokubhala. It has anhlobonhlobo izicelo kanye nezici high lokushisa ukumelana, ukwahlukanisa, engangenwa umlilo, ungangeni manzi futhi uphawu moya.
3m Fibre Indwangu
I-3m Fibre Indwangu iyindwangu engashi umlilo eyenziwe ngokumboza ilangabi le-polyurethane engaphezulu kobuso bendwangu ye-fiberglass enobuchwepheshe bokunamathela. It has anhlobonhlobo izicelo kanye nezici high lokushisa ukumelana, ukwahlukanisa, engangenwa umlilo, ungangeni manzi futhi uphawu moya.
Indwangu Ye-fiberglass Enamandla Kunazo Zonke
Indwangu ye-Pu Strongest fiberglass yakhiwe kusuka endwangu eyisisekelo ye-fiberglass futhi yafakwa noma yafakwa uhlangothi olulodwa noma izinhlangothi zombili ngenjoloba eyakhiwe ngokukhethekile yenjoloba. Ngenxa ye-silicone yerabha yomzimba, ayikhulisi nje kuphela amandla, ukufudumeza okushisayo, izakhiwo ezingangeni umlilo, izakhiwo zokuvikela, kepha futhi inokumelana ne-ozone, ukuguga komoya-mpilo, ukuguga okukhanyayo, ukuguga kwesimo sezulu, ukumelana nowoyela nezinye izinto.
Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Fabric Indwangu ukusebenza kwendwangu ephezulu ye-fiberglass eboshwe ngobuchwepheshe obukhethekile be-Polyurethane polymer .Le ndwangu yokuqedela enjalo ingamelana nokushisa kuze kufike ku-180 ℃ ngokuqhuma okufushane. Inokumelana okuhle kokuhuzuka nokumelana okuhle namafutha nama-solvents. Olunye uhlangothi / izinhlangothi eziphindwe kabili zezindwangu ezifakwe i-fiberglass ezinemibala eminingi nobubanzi ziyatholakala.
Indwangu ye-Pu Fiberglass
fiberglass camera PU indwangu kuyinto indwangu engangenwa umlilo enamathela ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi polyurethane ebusweni fiberglass indwangu nge bhala enamathela ubuchwepheshe. It has anhlobonhlobo izicelo kanye nezici high lokushisa ukumelana, ukwahlukanisa, engangenwa umlilo, ungangeni manzi futhi uphawu moya.
Indwangu i-fiberglass, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-Acrylic fiberglass,